के डाक्टर पढ्न मरिहत्ते नै गर्ने हो त ? धेरै बर्ष पहिले एउटा दुब्लो ज्यानको हल्का जुङाका रेखी देखिँदै गरेको ब्यक्ति साधारण पहिरनमा ब्याग भिरेर बिहानै काठमाण्डौको पुतलिसडकमा लम्किँदै थियो । कतै पुग्ने हतार थियो उसलाई । त्यसो नहुदो त बाटोमा हस्याङ्फस्याङ हुनुभन्दा सिरकमुनी मस्त सपना देखिरहेको हुन्थ्यो होला । हेर्दा सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो, कुनै कलेजतिरको गन्तब्य हुनुपर्छ । शायद ति पाइलाहरुमा भबिष्यमा सपना पूरा गर्ने उधारो आशा हुनुपर्छ । र त्यो हिँडाइ सानैदेखि अबचेतन मस्तिष्कलाई पोशन गरिएको अब्बल हुने चेतनाको परिणाम् हुनुपर्छ । उत्कृष्ट हुने इच्छाले डोर्याएको हुनुपर्छ त्यो आत्मा । तपाईंको अनुमान के होला ? किटान गरेर अनुमान लगाउनुपर्दा डाक्टर पढ्ने तयारी गरिरहेको हुनुपर्छ । ब्यक्ती ,परिवार र समाजको हरियो चस्माले देखेको सम्पन्नताले प्रचुर भबिष्य जो छ डाक्टरी पेशामा । प्रबेश नगर्दा सम्म सधैं हरियो देखिन्छ । कसैले उजाड छ भन्दैमा पत्याउँदैन त्यो मन । त्यहि हजारौँ मनहरु आजपनि लम्किँदै छन् काठमाडौ पुतलिसडक वरिपरि । उत्कट इच्छा र कर्मठ व्यबहारका साथम
सेतो कोटको रहर । सेतो कोट लगाउने रहरले बिरामीको सेवामा होम्मिएकी छन् सबिता । उनलाई बिरामीको सेवा गर्न कत्ती दु:ख लाग्दैन । रहरले भने पनि भाग्यले भने पनि स्वास्थ्य सेवाको युद्धक्षत्रमा होम्मिएकी सबितालाई अचेल कहिलेकाँही कुन्ठा जाग्ने गरेको छ । नजागोस पनि किन। स्वास्थ्य सेवा हालको अवस्थामा युद्धक्षत्र भएको छ । जहाँ सेवा गरेर मेवा पाउने आशा दुर्लभ भएको छ । बिना बन्दुकका योध्हा भएर युद्ध लड्नुपरेको छ । बिना बन्दुक त युद्धमा सिपाही जाँदैनन् भने कमजोर सुरक्षा, न्यून प्रोत्साहन, अनुचित पारिश्रमिक र अत्याधिक श्रमको भार बोकाएर बिरामीको सेवामा खटाउने राज्यलाई ति सेता कोटले सालीन देखिने सबिता जस्ता कर्मशील नर्सहरुको कुण्ठित हृदयको सराप त अवस्य लाग्नुपर्छ । स्वास्थ्यको पेशा सदैब जोखिममा हुन्छ । त्यस्तै सबिता पनि सेतो कोट, मिठो बोली, धैर्यता र आफ्नो सीपले झिनो सुरक्षामा बिरामीको सेवामा तल्लिन छन् । ड्युटी त चक्रिय आधारमा बिहान दिउसो राती गर्दै बित्दै जान्छन् । अस्पताल बाहिरको दुनियाँलाई त नर्सिङ भनेको अस्पतालमा सुइ लगाइदिने काम गर्छन् भन्ने लाग्छ । सुइ लगाउनु मात्रै क
बिहान ८ बजेको छ । मनिटरका आवाज सुन्न सकिन्छ । अस्पतालको गन्धले नाकलाई जिस्काइरहेको छ । अन्दाजी २५ बर्षिय युबक प्रतिक्षा गर्ने कुर्शिमा आ ई सि यू बाहिर कुर्दै बसेको द्रिश्य देख्न सकिन्छ । अनुहारको कान्ती उडेको छ । साथमा एकजना अन्दाजी ४० बर्षिय महिला पनि छिन् । मौन छिन तिनी । तर उनका आँखाले आसुँका भाषा बोलिरहेका छन् । अरु ब्यक्तिहरुको पनि आवतजावत बाक्लै छ । भित्र एक ५० बर्षिय ब्यक्ति आई. सि .यू मा जीवनका लागि संघर्ष गर्दै छन् । उनलाई करिब २ घण्टा अगाडि अस्पातलमा ल्याइएको थियो। । । शायद यि तीनजना साइनोले बाबु आमा र छोरा होलान् । सिक्ने कुरा धेरै छन । सबै आफ्नै जीवनमा भोगेर सिक्नलाई जीवन छोटो छ । त्यसैले आज हामी तिनै मनिटर मुनि संघर्षरत पुरुषको जीवनबाट केही सिक्ने प्रयास गरौँ । काम गर्दै थिए उनी । जब उनी एक्कासी बेहोस् भएका थिए । मुख बाङिएको थियो । एक हर नचल्ने भएको थियो। तुरन्तै अस्पातल पुर्याइएको थियो। अस्पतालमा उनको मस्तिस्कमा रगत बगेकोले आई. सि .यू मा भर्ना गरिएको छ । उनलाई सबैले बुझ्ने भाषामा “पारालाइसिस “ भएको छ । समस्या नदेखिएसम्म स्वास्थ्य ज
रेजिडेन्सिका सुरुका दिनहरु । घडीमा ७ :३० बजेको रहेछ । निद्राबाट झसँग बिउँझीएछु म । बिहान अबेर भएको जस्तो लाग्यो । ड्युटिमा जान अबेर भएछ भनेर छिटोछिटो नित्यकर्म गरेर रेडी भएँ । जिउ पूरै भारी भएको अनुभव थियो । जाङर रत्तिभर थिएन । शरीर तात्तिएको महसुस भएको थियो । निदार छाम्दा ज्वोरो आउँला जस्तो थियो। रुघाखोकी त महाराजगन्ज टिचिङ प्राङन प्रबेश गरेको अर्को दिन बाट सुरु भएको थियो । खुट्टाका कुर्कुच्चा र पैतला हुर्किएका थिए । हल्का घुमाएको जस्तो पनि भएको थियो । जिउ पुरै लथ्रक्क परेको थियो। सुत्न पाए त कुम्भकर्णको ६ महिने रेकर्ड पनि तोड्न सक्ने बिचार आएको थियो । पहिले पहिले दिनभरी हिंडेर बेलुका घर पुग्दा हुन्थ्यो यस्तो । धेरै बर्षपछि बाल्यकालको झझल्को आयो । सदरमुकामबाट घर हिंडेका गोरेटा बाटा याद आए । आफ्नो यो डाक्टरी गोरेटोको पनि लामो बाटो अझै तय गर्न बाँकी रहेको यथार्थ पुन स्मरण भयो। घर पुग्ने गोरेटो र डाक्टरी गोरेटो उस्तै लाग्यो । दुबै सांघुरा थकानपूर्ण यात्रा । फरक भन्नुपर्दा चाँही डाक्टरी यात्रा कतै टुङो नभएको । पढ्दै दुई तिहाइ उमेर बित्ने । य